Pope Benedict XVI hore wuxuu bixiyaa sababaha fadeexadaha xadgudubka jinsiga ee kaniisadda - TELES RELAY
ACCUEIL » DIINTA • COMPANY Pope Benedict XVI hore wuxuu bixiyaa sababaha fadeexadaha xadgudubka jinsiga ee kaniisadda
Benedict XVI, fadeexadaha xadgudubka galmada ee carruurta yaryar Kaniisadda waxay leeyihiin asal ahaan gaar ah: kacaanka galmada ee 1960 sano, fikrado cusub oo fiqiga iyo burburkii rumaysadka ee West ah. Taasi waa waxa uu sharaxay Khamiistiiqoraalka bogagga 18 waxaa daabacay majaladda Jarmalka Jarmal Klerusblatt.
Kacaanka 1968 gaar ahaan "dagaalka xoriyada galmada oo aan hadda la aqbalin", ayuu qoray Pope Emeritus in uu warqad dheer. "Pedophilia ayaa sidoo kale lagu ogaaday inuu yahay mid la oggol yahay oo haboon. "
"Xagjirnimada" ee sanadaha 1960
Benedict XVI ayaa maanta ku noolyahay barxad yar Vatican. comments uu ku pedophilia, mid ka mid ah uu bogaadiyay hadlaya yar tan iyo markii uu iska casilay waxaa lix sano, sababa la ruxruxo lama filaan ah ku dhex fiqiga ee qaar ka mid ah iyo xadgudub galmo. Wixii fiqi ahaaneed ee Maraykanku kuyaala Brian Flanagan, xiriirka Benedict XVI inta udhaxeysa 1960 sano iyo pedophilia waa "sharaxaad been ah iyo ceeb ah". SOURCE: www.20minutes.fr/societe/2495419-20190412-pedophilie-benoit-xvi-scandales-abus-sexuels-eglise-expliquent-mai-68